|||: May 2008
မြန်မာနိုင်ငံသို့ နာဂစ်မုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ လူတိုင်းအသိပင်ဖြစ်သည်။ ပြည်သူတွေအတိဒုက္ခရောက်ကြရသည်။ ဒီကြားထဲ ကြားရသည့် သတင်းတွေကမကောင်း။ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ဖြစ်နေကြသူများ၊ မိသားစုဝင်များ ပျောက်ဆုံး၍ စိတ်ကယောင်ခြောက်ခြားဖြစ်သူများ၊ ပေါလောပေါ်နေသောအရာများ၊ တန်းစီအိပ်ပျော်နေသော ကလေးငယ်များ၊ ဝါထိန်နောက်ကျိသော ရွံ့ရေများ၊ ဟောင်းလောင်းပေါက် အမိုးများ၊ မုန်တိုင်းတိုက်နေတုန်း သစ်ပင်ပေါ်တွင် ခိုကာ မုန်တိုင်းပြီးသည့်နောက် ဝတ်စရာမရှိ၍ အလောင်းဆီက ထမိန်ကောက်စွပ်ခဲ့ရသော အမေအို၊ ဆားငန်ရေဖုံးလွှမ်းကုန်သော လယ်ကွင်း၊ စပါးကျီ စသည် စသည်ဖြင့် ချရေးလို့မကုန်နိုင်သော ဒုက္ခများကို နာဂစ်ကဆောင်ယူလာခဲ့သည်။
သတင်းကြားကြားချင်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေရုံဖြင့်မပြီး လုပ်စရာရှိသူများကို ဖင့်နှေးမနေပဲဆောင်ရွက်သူများရှိသည်။ မဆောင်ရွက်သူတစ်ချို့လည်းရှိသည်။ အလှူငွေတွေကောက်ကြသည်။ အဝတ်အစားတွေအလှူခံသည်။ ချောင်ကြိုချောင်ကြား ကျေးရွာတွေအထိ သွားကာ မုန်တိုင်းကယ်ဆယ်ရေးတွေ တပိုင်တနိုင် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ ထိုသူများသည် အားယားနေသူများလော? မတရားရသော ပိုက်ဆံတွေပေါများကာ နာမည်ကောင်းလိုချင်၍ လျှောက်လှူနေသူများလော ကျွေန်တော်စဉ်းစားကြည့်သည်။ မဟုတ်…ကိုယ်အလုပ်ကိုဖြတ်၍ ဒုက္ခသည်များကို ဂရုဏာသက်ကာ မအားသည့်ကြားမှ အုတ်တစ်ချပ်သဲတစ်ပွင့်အနေဖြင့် ကူညီနေသူများဖြစ်သည်။
ချာတိတ်တစ်ယောက်က သူ့ iPod Player ကိုရောင်းချ၍ လှူသည်။ အရင်က ဆူနာမီဒဏ်ခံခဲ့ရဘူးသော ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရာဘာခြံအလုပ်သမားများကလည်း သူတို့ချွေးနှဲစာထဲက လှူဒါန်းသည်။ သူတို့နည်းတူ တစ်ခြားနိုင်ငံများတွင် ဒုက္ခသုက္ခပေါင်းစုံခံကာ ပိုက်ဆံတစ်ပြားကိုမရရအောင်ရှာနေသူများကလည်း မိမိတို့၏ လုပ်အားမှရသော ချွေးနှဲစာများဖြင့် ဒုက္ခသည်များအတွက် လှူဒါန်းသည်။ မြန်မာပြည်တွင် ဒုက္ခရောက်နေသော မောင်နှမသားချင်းဒုက္ခသည်များကို ဒီအတိုင်းပစ်မထားကြောင်း အရေးကြုံက သက်လုံကောင်းသော မြန်မာလူမျိုးစိတ်ဓာတ်ကို လှစ်ပြနေသလိုပင်။
မေတစ်ယောက်ဆိုရင်လည်း သူ့အမေနေမကောင်းဖြစ်နေသည့်ကြားမှ ဒုက္ခသည်တွေကို ဦးစားပေးကာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ကိုသွားရောက်ကူညီခဲ့သည်။ သူမ ပြန်ရောက်တော့ သူ့အမေ၏ အသက်ကိုပင်မမှီတော့။ သူ့အမေကလည်း နောက်ဆုံးအချိန်ဆေးသွင်းသည်ကိုပင် လက်မခံ၊ ကိုယ့်ဝေဒနာအစား ဒုက္ခသည်တွေအတွက် ပူပန်နေခဲ့သေးသည်။ သားသမီးများထဲတွင် တစ်ဦးတည်းသောသမီး တစ်ခြားနိုင်ငံမှ ခဏတစ်ဖြုတ်ပြန်ရောက်နေခိုက်၊ မိမိဝေဒနာသည်းနေချိန်၌ပင် မိမိအတ္တအစား ဒုက္ခသည်တွေဆီ သွားရောက်ခွင့်ပြုခဲ့သော အမျိုးသမီးတစ်ယောက်၏ စိတ်သဘောထားကြီးမြင့်လေးမြတ်မှုကို ကျွန်တော် လေးစားမိပါသည်။
လူတိုင်းသည် မိသားစုကို အချစ်ဆုံးဖြစ်သည်။ ရပ်ဝေးမှ ခဏတစ်ဖြုတ်အိမ်ပြန်ရောက်သူတိုင်း မိသားစု၏ အရသာကိုခံစားချင်ကြစမြဲဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်သည် အနှစ်နှစ်အလလ စောင့်ခဲ့ရသော တန်ဖိုးရှိသောအချိန်အခိုက်အတန့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သော အချိန်အခါမျိုးမက မိခင်မကျန်းမမာဖြစ်နေ၍ အိမ်တွင်မရှိမဖြစ်နေရမည်ဖြစ်သော်လည်း မိမိ၏ တစ်မိသားစုထက် အတိဒုက္ခရောက်နေသော၊ စားရမဲ့သောက်ရမဲ့ဖြစ်နေသော၊ ဝါးအစည်းပြေနေသော တစ်ခြားမိသားစုအများအပြား အတွက် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်ကာ တတ်အားသရွေ့ကူညီခဲ့သော စိတ်ဓာတ်ကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ချီးကျူးမိပါသည်။
နာဂစ်မိုးသည် ဒုက္ခပန်းတွေကိုပွင့်စေသည်။ သို့သော်သူနှင့်အတူ မမြင်ရသော စည်းလုံးခြင်း လျှပ်စီးစွမ်းအင်တစ်ချို့ကိုလည်းယူဆောင်လာခဲ့သည်။ နာဂစ်ကြောင့် မြန်မာအချင်းချင်းပို၍ စည်းလုံးရသည်။ တစ်ဦးဒုက္ခရောက်နေပါက တစ်ခြားသူတစ်ဦးကလည်း လျှစ်လှူမရှုတတ်သော မြန်မာစိတ်ဓာတ်ကို မီးမောင်းထိုးပေးခဲ့သည်။ အခက်အခဲတစ်ခုကို အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းမည်ဆိုသော မိသားစုစိတ်ဓာတ်ကို မှတ်ကျောက်တင်ပေးခဲ့သည်။ နာဂစ်ဒုက္ခရောက်သူများ အတွက် ဒုက္ခသုက္ခပေါင်းစုံခံကာ ကူညီပေးသူများအားလုံးကိုလည်း သူတို့အားလုံးကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ကြောင်း ကျွန်တော့် မဖြစ်ညစ်ကျယ်ဘလော့ခ်ကနေ လေးစားဂုဏ်ပြုလိုပါသည်။ မုန်တိုင်းဝင်ပြီးရင် လေပြည်တိုက်ခတ်စမြဲဖြစ်သည်။ အားလုံးအတွက် လေပြည်သုတ်ဖြူးချိန်…ထိုအချိန်သည်လည်း မဝေးတော့ပြီဖြစ်ပါကြောင်း….
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 12:04 AM No comments: Links to this post
ခုတစ်လော ရွှေပေလွှာဆန်ဆန် မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုရပါတယ်ဗျာ…ဘာတဲ့ ‘BUDDHA’ is coming very soon”, send this msg to9people, you will get good news tomorrow. If u neglect bad luck for9years, this is proved true…..ကျွန်တော့် ဖုန်းမက်ဆေ့ခ်ျထဲဝင်တာမှ ဝင်လာမစဲ တသဲသဲဗျာ… စဉ်းစဉ်းစားစားလေး ပို့ကြပါလို့ပြောလိုပါတယ်…
ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်တုန်းကလဲ တောင်ပုလုဆရာတော်ကြီးရဲ့. ဒီ ဂါထာကို ကူးပါ ပြီးရင် သက်စေ့လျှောက်ဝေပါ…မဝေရင် ဘာဖြစ်မယ်..ညာဖြစ်မယ်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းတွေကတဆင့် ဂါထာလိုလို ဘာလိုလို စာရွက်အပိုင်းအစတွေရဘူးပါတယ်.. ကျွန်တော်ကတော့ လာပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကို မေးခွန်းတွေနဲ့ ဦးနှောက်စားပေးလိုက်ပါတယ်..ဆရာတော်ရဲ့ ဂါထာကို မရွတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲ? ဆရာတော်က ထေရဝါဒလား၊ ဂါထာ မန္တာန်တွေကို ယုံသလား? စသည်ဖြင့်ပေါ့…နောက်ပိုင်း အဲဒီသူငယ်ချင်း ကျွန်တော့်ကို တွေ့ရင်ဝေးဝေးကရှောင်ပါတော့တယ်…တစ်ကယ်က ဘုရားသားတော် ထေရဝါဒ ဆရာတော်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်း အဲလိုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေရဲ့ ယုံလွယ်မှု၊ Superstitious ဖြစ်လွယ်မှု တစ်နည်းအားဖြင့် မမြင်ရသောတစ်စုံတစ်ရာကို အစိုးရိမ်လွန်၍ ကြောက်လွယ်မှု အဲဒါတွေကို အခွင့်ကောင်းယူသူတွေက လုပ်နေတယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ခုလည်း Forward လုပ် မလုပ်ရင် ဘာဖြစ်မလေးညာဖြစ်မလေးနဲ့ အဲလို မက်ဆေ့ခ်ျတွေဝင်ပါတယ်…တစ်ချို့ဆိုလည်း ဘာမှန်းညာမှန်းမစဉ်းစား ကိုယ့်လက်ကလွတ်ဗြွတ်ဆိုပြီး ဆင်ကန်းတောတိုးသလို သူများတွေကို လိုက်ပေးပါတယ်… နောက်လက်ထဲရတဲ့သူကလည်း နောက်လူတွေကို ထပ်ပေး..အဲလိုနဲ့ လုံးလည်ချာလည်လိုက်နေတာပါ…ဆိုးတာက ခေတ်ပညာတတ်၍ နိုင်ငံခြားရောက်ကာ ပညာသင်ကြားနေသောသူများပါဝင်နေခြင်းပါ။
၁) မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း
၂) သူများက မလုပ်ရင်ဘာဖြစ်မည် ညာဖြစ်မည် စသည်ဖြင့် ကျိန်စာဆန်ဆန်ရေးသားခြင်းများကို ဆင်ကန်းတောတိုး ယုံလွယ်ခြင်း
၃) လက်တွေ့ကျကျ မစဉ်းစားကြခြင်း စတဲ့ ပျော့ကွက်တွေကိုတွေ့ရမှာပါ။ ရှေးထုံးကိုလည်း မပယ်နဲ့ဈေးသုးံလည်းမလွယ်နဲ့ဆိုတဲ့ စကားကိုလည်းကြားဖူးပါတယ်။ တစ်ချို့ထိန်းသိမ်းသင့်သော မြန်မာရိုးရာ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို ထိန်းသိမ်းသင့်ပါတယ်။ ဤကဲ့သို့သော ရွှေပေလွှာ ပို့သည့်ထုံးစံများကိုတော့ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ တိုးတက်လိုစိတ်ရှိသူများ စိတ်ဓာတ်မြင့်မားမြင့်မြတ်သော မြန်မာနိုင်ငံသားကောင်းဖြစ်လိုသူ မှန်သမျှ စွန့်လွှတ်သင့်ပါကြောင်း…..စိတ်ထားကောင်းလျှင် ကံကောင်းမည်ဆိုသော အစွဲကိုသာယုံကြည်သင့်ပါကြောင်း….
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 7:32 AM No comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 12:47 AM No comments: Links to this post
ဒီနေ့ရန်ကုန်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရတယ်။ သူတို့တွေ မနေ့က နာဂစ်ဒုက္ခသည်တွေအတွက် စားစရာနဲ့ အဝတ်တွေလှူစရာ တွေကို ထန်းပင်ကုန်းရွာမှာလှူလို့ ရန်ကုန်ကိုပြန်လာကြတယ်။ ဒီအပတ် စနေ့နေ့မှာလည်း ဘိုကလေး၊ဖျာပုံစတဲ့ လူသိပ်မရောက်တဲ့ရွာတွေအထိ သွားပြီးလှူမယ်လို့ပြောတယ်။ သူတို့အဖွဲ့က MMA (Myanmar Medical Association)၊ ရည်ရွယ်ချက်က အကူအညီမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေကို အဓိက ထားပြီး အလှူပေးဖို့ပါ။ အဲဒီတော့ စင်္ကာပူကလူများ သဒ္ဒါတတ်အားနည်းများမဆို အကူအညီပေးချင်ရင် ကျွန်တော့်ဆီကို ဆက်သွယ်ကြပါ။
ရန်ကုန်ကအလှူရှင်များအတွက် ကိုဇော်လင်းထွန်း - HP: 098551342 ဆီကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်။
အားလုံးလည်း ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ အလှူခံကြမယ်၊ လှူကြမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။ ဘာပဲပြောပြော လှူစရာနေရာများတော့ လုပ်အားပေးအဖွဲ့တွေလည်းများများလိုတာပေါ့။ ဒီအဖွဲတွေအားလုံးကို သာဓုခေါ်ပါတယ်ဗျာ…
စင်္ကာပူဒေါ်လာ ၃၂ = ယမ်ယမ် ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ် ၁ဖာ (၁ဖာ = ၆ဗူး၊ ၁ဗူး = အထုပ် ၃၀)
မှတ်ချက်။ ။ စက်ရုံအရင်းဈေးအတိုင်း
ထမင်းဘူး ၃ ယောက်စာ ဗမာငွေ ၂၈၀ ကျပ် = စင်္ကာပူ ၃ ၄ပြား
မှတ်ချက်။ ။ စင်္ကာပူ တစ်ဒေါ်လာကို ဗမာငွေ ကျပ် ၈၃၀ လဲလှယ်နှုန်းနှင့်တွက်သည်။\_
အဲဒီတော့ ဘယ်လောက်ပဲလှူလှူ ကျွန်တော်တို့ဆီက စင်္ကာပူ တစ်ကျပ်ဆိုရင် ဟိုမှာ လူ ၆ယောက်လောက် ထမင်းစားနိုင်အောင် စီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေရှိတော့ နည်းတယ်များတယ်သဘောမထားပဲ လှူကြပါဗျာ။ အားလုံးကို လည်း နာမည်နဲ့ စာရင်းနဲ့ ပြန်လည်ဖော်ပြပေးပါ့မယ်။
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 9:09 AM No comments: Links to this post
အမေပျောက်တဲ့ သားများ.. အဲလို
ဒိဋ္ဌိ ဆိုတာကို ဖြည့်ရေးလိုက်
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 1:31 AM No comments: Links to this post
ဆိုင်ကလုန်း နာဂစ်သည် အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာ၏ မြောက်ဘက်ပိုင်းတွင် ဆိုင်ကလုန်း နီနာနောက် ဒုတိယကြောက်စရာအကောင်းဆုံး လူအသေအပြောက်အများဆုံးမုန်တိုင်းဖြစ်သည်။ ယခင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးသော ဆိုင်ကလုန်းများထဲတွင် နံပါတ် ၁၂ မြောက်အပြင်းထန်းဆုံးဆိုင်ကလုန်းဖြစ်သည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့သော ဆိုင်ကလုန်းမာလ အပြီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသော အကြီးဆုံး အပူပိုင်းဒေသ မုန်တိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ဆိုင်ကလုန်းအသေးစား မာလဝင်လာသည်။ ဒီနှစ် နာဂစ်၊ လူတွေ တိရစ္ဆာန်တွေ၊ အတိဒုက္ခရောက်ကြရသည်။ အိုးအိမ်တွေပျောက်ကြရသည်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးရသည်။ စားသောက်ကုန်တွေ၊ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းဈေးတွေတက်ကုန်သည်။ ငတ်ပြတ်နေသော ဆီဈေးတက်၍ ဒုက္ခရောက်နေသော ပြည်သူအတွက် နူရာဝဲစွဲ၊ လဲရာသူခိုးထောင်း ဖြစ်နေသည်။
ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသည် တစ်ချိန်က အာရှတွင်မျက်နှာပန်းပွင့်ခဲ့သည်။ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ ကုန်းပိတ်လာအိုနိုင်ငံ၊ ဆူနာမီဖြစ်ပွားခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံတို့နှင့်စာလျှင် ကမ္ဘာပေါ်တွင် သဘာဝဘေးအန္တာရယ် ကင်းရှင်းသော နိုင်ငံအဖြစ်ဖြင့် ဘိုးဘေးများ အဆက်ဆက် အေးအေးချမ်းချမ်းနေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓသာသနာထွန်းကားသည်။ တစ်ချိန်ကရွှေရောင်လွှမ်းခဲ့သော မြို့တော်ဖြစ်သည်။
ယခုတော့.. သဘာဝဘေးအန္တာရာယ်ကို ပြည်သူလူထုအတွက် အရေးတကြီး ရှောင်တခင် ကြိုတင်အသိပေးရန်အတွက် ပျက်ကွက်ခြင်း၊ မိုးလေဝသတိုင်းတာသည့် စက်ပစ္စည်းကိရိယာ အင်အားချို့တဲ့ခြင်း၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးညံ့ဖျင်းခြင်း စသည့်အရင်းအမြစ်ချို့တဲ့မှုများအားလုံးပေါင်းသော အခါ လူပေါင်းများစွာ၏ အသက်အိုးအိမ် စည်းစိမ်ဖြင့် စတေးလိုက်ရပြီဖြစ်သည်။ ဒီကိစ္စ မည်သူ့တွင် တာဝန်အရှိဆုံးနည်း? အရင်းစစ်လိုက်လျှင် တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်ပေါ်တွင်သာ မူတည်လေသည်။ ခေတ်မီသော မိုးလေဝသကိရိယာများမှ ဖမ်းယူရရှိသော သတင်းမှတဆင့် ကောင်းမွန်သော ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ယက်ကို အသုံးပြုကာ ဆင်းရဲရိုးသားကြရှာသော တောင်သူလယ်သမားများ၊ တံငါသည်များ စသည့် ဒေသခံပြည်သူတွေအပေါ်တွင် ကြိုတင်အသိပေးမှု ထိထိရောက်ရောက်လုပ်ခဲ့လျှင်၊ သူတို့၏ ကိုယ်ပိုင် လူနေမှုအဆင့်အတန်းများ ပိုမိုမြင့်မားနေမည်ဆိုလျှင် သူတို့ကိုယ်ပိုင် ကားဖြင့် တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ကိုယ်ပိုင် ပစ္စည်းများသယ်ကာ မုန်တိုင်းလွတ်ရာသို့တိမ်းရှောင်နေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အနည်းဆုံးတော့ အသေအပျောက်ဖြင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများ ဤမျှများပြားမည်မဟုတ်ပေ။ ယခုပြည်သူ သောင်းချီမက သေသည်။ တစ်ချို့အိမ်ထဲမှာ ထိုင်ရင်း၊ အိပ်ရင်းသေသူများအဖို့ ဘာဖြစ်သည်ဟုပင် သိချိန်မရလိုက်ပဲ အိမ်ရေထဲမျောပါကာသေဆုံးကြရပေမည်။
ပျောက်ဆုံးနေသူများအတွက်လည်း နိုင်ငံတကာအကူအညီများကို လျင်လျင်မြန်မြန် လမ်းမဖွင့်ပေးထား၊ သဘာဝဘေးအန္တာရာယ်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ဝင်ရောက်လာမည့် ရောဂါဘယဆိုသည်မှာ အမြန်ဆုံးတားနိုင်လေ ကောင်းလေဖြစ်သည်။ အချိန်ဆွဲနေခြင်းဖြင့် အကျိုးရှိမည်မဟုတ်။ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ထိထိရောက်ရောက် ကယ်တင်ရေးလုပ်ငန်းများကို လိုအပ်လျှင် စစ်တပ်အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ စစ်တပ်သည် တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေး၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ရေး အတွက်ဆိုလျှင် ဒီအချိန်တွင် မှတ်ကျောက်အတင်ခံနိုင်ပါသည်။ ဆန္ဒပြသူများအား ဝါးရင်းတုတ်ဖြင့်ရိုက်တတ်ရုံ သံဆူးကြိုးခွေကာတတ်ရုံဖြင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုတပ်မတော်ဟု အမည်မခံသင့်ပေ။
နောင်တွင် ဤကဲ့သို့သော ဖြစ်စဉ်များမှ အတတ်နိုင်ဆုံးကာကွယ်ရန်၊ ထို့ပြင် နိုင်ငံအလယ်တွင် မျက်နှာငယ်နေသောမြန်မာလူမျိုး အဖြစ်မှ အဆင့်အတန်းမြှင့်တင်ရန်အတွက် ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင် တကယ်တော်သော တတ်သော အလုပ်လုပ်သော အစိုးရတစ်ရပ်လိုအပ်သည်။ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ဒီထက်မက အဆပေါင်းများစွာ ကောင်းမွန်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြည်သူတို့အတွက် ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကောင်းများရှိသင့်သည်။ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် အခွင့်အလမ်းများစွာ ဖန်တီးပေးသင့်သည်။ တစ်ခြားနိုင်ငံများနှင့် အနည်းဆုံး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်ရင်ဘောင်တန်းနိုင်ရန် အမြဲတမ်းကြိုးစားနေသင့်သည်။ တစ်ခြားနိုင်ငံများသို့ အစည်းအဝေမက အလည်အပတ်သွားရောက်သောအခါ သူတို့နိုင်ငံက ဘာတွေဖြစ်နေပြီ၊ ငါတို့ဘာတွေလိုနေသေးလဲ ဘယ်လိုသာအောင်ကြိုးစားမလဲ အမြဲစဉ်းစားနေသင့်သည်။ ခြောက်တန်းကလေးကအစ စဉ်းစားတတ်သော အကျင့်ဖြစ်မည်။ ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေကြသနည်း?
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 12:12 AM No comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 3:52 AM No comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 12:48 AM No comments: Links to this post